के युवतीहरु कम उमेरका युवकसँग विवाह गर्दा बढी खुसी हुन्छन् ?यस्तो रहेछ वैज्ञानिक तथ्य | Rajmarga
के युवतीहरु कम उमेरका युवकसँग विवाह गर्दा बढी खुसी हुन्छन् ?यस्तो रहेछ वैज्ञानिक तथ्य
ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन….
जब प्यार करे कोई, तो देखे केवल मन….
प्रेमका अगाडि उमेरको सीमा र जन्मको बन्धनलाई तोड्ने कुरा गर्ने जगजीत सिंहको यो गजल वर्षौदेखि कयौ उत्सवलाई गुलजार गरिरहेको छ।
प्रेममा उमेरको सीमाहरु तोड्ने यस्तै एउटा तस्वीर केही दिनपहिला देखियो, जब खबर सार्वजनिक भयो कि बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले आफूभन्दा १० वर्ष कान्छा अमेरिकी गायक तथा आफ्नो मित्र निक जोनाससँग विवाह बन्धनमा बाँधिने निर्णय गरिन् ।
यो खबर सार्वजनिक भएपछि दुवै सेलिब्रेटीलाई तमाम स्थानमा बधाई सन्देश प्राप्त हुन थाल्यो । यद्यपि प्रियंका र निकले स्वयम आफ्नो विवाहसम्बन्धी निर्णयको पुष्टि गरेका छैनन्, तर उनीहरुले विवाहसम्बन्धी खबरबाट प्राप्त बधाई सन्देश अस्वीकार पनि गरेनन् ।
यो बधाई सन्देशका साथसाथै एउटा अर्को मुद्दा बहस सुरु भएको छ कि कुनै सम्बन्धमा उमेरमा ठुलो फरक हुनु सामाजिक तानाबानाविपरीत त छैन ।
जब युवती बढ्छन्
एक वर्ष पहिला जब इमैनुएल मैक्रो फ्रान्सका राष्ट्रपति चुनिए तब उनको राष्टपतिको पदमा पुग्नुका साथै एउटा अर्को खबर पनि चर्चामा आएको थियो, उनको रिलेशनशीप स्टेटसका बारेमा ।
मैक्रोकी श्रीमती र फ्रान्सकी फर्स्ट लेडी ब्रिटेज मैक्रो उनीभन्दा २४ वर्ष जेठी छन् । जुनबेला इमैनुएल स्कुलमा थिए तब ब्रेक्जिट उनी शिक्षिका थिइन्, र, दुवैबीच त्यहीबेला प्रेम गाढा भएको थियो । सामाजमा एउटा आम धारणा छ कि विवाहका बेला महिलाको उमेर पुरुषभन्दा कम हुनु पर्दछ । भारतमा सरकारले विवाहका लागि कानुनतः २१ वर्ष तोकेको भने युवतीको १८ वर्ष ।
यस्तोमा प्रश्न उठ्न सक्दछ कि के जब कुनै विवाहमा युवतीको उमेर युवकको भन्दा बढी हुन्छ, तब के त्यो समाजले अपनाएको निमयविरुद्ध हुन्छ ?
फोर्टिस र आइबीएस हस्पिटलमा म्यारिज काउन्सिलरका रुपमा काम गर्ने मनोवैज्ञानिक शिवानी मिसरी साढुले यस विषयमा बीबीसीसँग विस्तारमा बताइन् ।
उनी भन्छिन् कि धेरै उमेरका महिलाहरुको कम उमेरका युवकसँग सम्बन्ध कायम गर्नु वा विवाह गर्नु्, उनीहरुको पुरानो अनुभवहरुको आधारमा हुने गर्दछ ।
शिवानी यस्ता सम्बन्धलाई थप स्पष्ट पार्दै भन्छिन्–कुनै बढी उमेरका महिला आफ्नो पुरानो अनुभवहरुबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्दछन् । उनीहरु आफ्नो जीवनमा निकै कुरा सिकिसकेका हुन्छन् र उमेरको एउटा चरणमा आउपछि उनीहरुलाई लाग्दछ कि अब आफ्नो जीवनमा जोडिने व्यक्तिमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकियोस, यस्तोमा उनीहरु कम उमेरका युवाहरुका साथ सहज ठान्दछन् ।
हिन्दी चलचित्र ‘दिल चाहता हैं’ मा अक्षय खन्नाले जुन युवकको भूमिका निभाएका छन्, उनको आफूभन्दा बढी उमेरकी महिलासँग प्रेम हुन्छ । यो कुरा उनी आफ्नो सबैभन्दा नजिकको साथीलाई बताउँछन् । तर उनको साथीले उनको प्रेमको गहिराईलाई बुझ्नुको साटो ठट्टाका रुपमा लिन्छन् ।
यो चलचित्रमा देखाइएको मजाकको दृष्यले वास्तवमा यसप्रकारको सम्बन्धको वास्तविकता बयान गरिरहेको छ।
भारतको दिल्लीको उत्तम नगर निवासी मानसी पनि आफ्नो श्रीमानभन्दा पाँच वर्ष जेठी छन् । उनको विवाह सन् २०११मा भएको थियो ।
श्रीमान श्रीमतीबीच आपसी समझदारी राम्रो छ, तर कहिलेकाहिँ मानसीलाई साथीहरुले चिढ्याउने गर्दछन् कि तिमीले बच्चासँग विवाह ग-यौ ।
मानसी यो कुरा भलै हाँस्दै टार्छिन् तर यसप्रकारको मजाक कतिपय अवस्थामा गम्भीर परिणाममा परिवर्तन हुन्छ । म्यारिज काउन्सिलर शिवानी त्यस्ता परिणामका बारेमा भन्छिन्–मेरोमा धेरै यस्ता क्लाइन्ट आउँछन्, जसकाबीचमा अनबनका कारण साथीहरुको मजाक वा नातेदारको कुरा काट्ने बानीले हुन्छ ।
उमेरमा दूरीको परिणाम
यदि दुई जनाबीच उमेरमा निकै बढी दूरी छ भने यसको अलग अलग प्रकारको परिणाम देख्न पाइन्छ । जस्तै यदि महिलाको उमेर ४० भन्दा माथि छ तब उनी सम्बन्धमा आउँछिन् तब प्रेग्नेन्सीसँग सम्बन्धित समस्याहरु आउन सक्दछ । यसरी नै मानसिक रोग पनि बढ्यौलीका साथ बढ्न लाग्दछ ।
यदि दुवै जना समान उमेरका छैनन् भने उनीहरुबीच तालमेल मिलाउन समस्या आउन सक्दछ । बीबीसी रेडियो १ को एउटा रिपोर्टका अनुसार कम उमेरका व्यक्तिको सोच्ने तरिका अलग हुन्छ, जबकि बढी उमेरका व्यक्तिको सोच अलग्गै हुन्छ । यस्तोमा कतिपय अवस्थामा सोच्ने र बुझ्ने विषयमा मतभेद आउन सक्दछ ।
यद्यपि आपसी तालमेलसम्बन्ध यो कुरा उमेरको अलग अलग चरणअनुसार परिवर्तन पनि हुन्छ । यो कुरालाई शिवानीले विस्तारसँग भनिन्–मानिलिनुस् कि एउटा जोडी २० वर्ष र ३० वर्षको छ तब उनीहरुबीच आपसी मतभेद देखिन सक्दछ । तर अर्को जोडी ५० वर्ष र ६० वर्षको छ भने उनीहरुबीच त्यही समान मुद्दामा सहमति देख्न सकिन्छ । यद्यपि दुवै उदाहरणमा उमेरको दूरी त १० वर्षकै थियो । तर कतिपय अवस्थामा यस्तो सम्बन्धमा उमेरको चरण बढी महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।
शिवानी भन्छिन्–जब हामी जवान हुन्छौ तब हाम्रा आशा, महत्वाकांक्षाहरु अलग हुन्छ, त्यतिबेला उमेरमा पाँच वर्षको दूरी पनि धेरै देखिन्छ । जबकि उमेर ढल्किँदै जाँदा यही दूरी अनुभवमा परिवर्तन भएर सहमतितर्फ जाने गर्दछ ।
अमेरिकाको इमोरी युनिभर्सिटीको एउटा अध्ययन भन्छ कि यदि उमेरको दूरी धेरै बढी छ भने उनीहरुबीच सम्बन्ध बिच्छेदको सम्भावना बढी हुन्छ । रैंडल ओल्सनले इमोरी युनिभर्सिटीको यो अध्ययनमा What makes forastable marriage? नामको दुई भागमा जारी गरिएको थियो । यो दुई भागमा भनिएको थियो कि कुनै जोडीबीचको जोडीको उमेरको दूरी जति बढ्दछ सम्बन्ध विच्छेदको सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ । यद्यपि यो रिपोर्ट अमेरिकाको जोडीमा आधारित छ।
के रहन्छ सोच ?
एउटा प्रश्न यो पनि उठ्न सक्दछ कि आफूभन्दा कम उमेरका साथ सम्बन्ध कायम गर्नुअघि कुनै युवतीको दिमागमा के विचार चलिरहेको हुन्छ ?
यो प्रश्नको जवाफमा शिवानी भन्छिन्–त्यसो त कुनै पनि सम्बन्ध आम सहमति र रोजाईका साथ सुरु हुन्छ । आफूभन्दा कम उमेरको युवक मन पराउने बेला युवतीहरुको दिमागमा एउटा कुरा चलिरहेको हुन्छ–पुरानो सम्बन्धलाई भूल्नु । वास्तवमा युवा युवकका साथ सम्बन्ध बनाउन युवतीहरु स्वयम पनि युवा महशुस गर्न लाग्दछन् । उनीहरुलाई महशुस हुन्छ कि उनी अहिले पनि स्वयम युवाहरुलाई आकर्षित गर्न सक्छिन् ।
यसविपरीत एउटा युवक स्वयमलाई बढी उमेरका युवतीका साथ सम्बन्ध कायम गर्ने बेला के कुरामा ध्यान दिन्छ होला ? यसका बारेमा शिवानी भन्छिन् कि युवकका लागि यो सम्बन्ध एकप्रकारले कम जिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ, उ एउटा अनुभवी साथीको साथ पाएर धेरै जिम्मेवारीहरुबाट बच्दछन् ।
शिवानी भन्छिन्–यो सम्बन्ध दुवैका लागि विन विन स्थिति हुन्छ । यदि दुवैको आपसी समझदारी राम्रो छ भने युवा युवती एकअर्काको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दछन् । बढी उमेरकी युवतीहरु आत्मनिर्भर हुन्छन्, यस्ता युवतीहरुका साथ युवकलाई बढी चिन्ता गर्नुपर्ने हुँदैन ।
शिवानी यसो पनि भन्छिन् कि यसप्रकारको सम्बन्धमा आमरुपमा पहिलाबाटै बच्चा हुने वा नहुने सम्भावनामा विचार गरिन्छ । यदि एउटा २० वर्षको युवक ३० वर्षको युवतीसँग डेट गरिरहेको छ भने शायद उ फ्यामिली प्लानिङको सम्बन्धमा उन बढी स्पष्ट नहुन सक्छ, तर यदि एउटा ३० वर्षको युवक ४० वर्षको उमेरकी महिलासँग डेट गरिरहेको छ भने उनीहरुबीच फ्यामिली प्लानिङसम्बन्ध्ी सहमति बन्दछ ।
उमेरको दुरी सफल वा असफल दुवै प्रकारको धेरै उदाहरण देख्न सकिन्छ । जहाँ सैफ अलि खान र उनकी प्रगम श्रीमती अमृता सिंहबीचको उमेरमा ठुलो दूरी थियो । र उनीहरुको विवाह सफल हुन सकेन । पछि सैफ अलि खानले आफूभन्दा निकै कम उमेरकी करिना कपुरसँग विवाह गरे।
यही अर्कातिर यस्ता पनि कयौ उदाहरण छन् जहाँ श्रीमतीको धेरै उमेर भए पनि वैवाहिक जीवन सफल रहेको छ, जस्तै भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर र अञ्जली तेन्दुलकरको जोडी । बीबीसी हिन्दीबाट
Previous post: सबैले थाहा पाउनु जरुरी, यस्ता रहेछन् हिन्दू धर्मका आश्चर्यजनक २९ वटा रहस्य
Next post: यसरी खिचिएको थियो ‘मेरी मामु’को शिर्ष गीत ‘आमा’